Shiinaha warshad Sheet Gelatin 2.5g iyo alaab-qeybiyeyaal. Gelken
Tusaale ahaan, habka la taaban karo ee keega durus mousse waa: jarjar xaleefyada gelatin qaybo yaryar oo ku qoy biyo qabow (xaddiga biyuhu way ka yar yihiin xaleefyada gelatin); U kala jar keegga loo yaqaan 'chiffon cake' laba qaybood, qiyaastii midkiiba 1.5cm Iska jar keegga la jarjaray oo u isticmaal maqas si aad ugu gooyso dhinacyada. Ka qaad geesaha la dubay si aad mooska u aragto mid fiican. Qulqul kiniiniyada jilicsan ee jilicsan kuna dar 30 garaam oo caano ah. Kuleyli digsi yar oo biyo ah digsi yar. Ku dhalaasho go'yaasha gelatine kuleylka. Qabow Ku shub duriga isku dar ah oo ka nadiifi. Kareemka khafiifka ah ee sonkorta karbaaska leh ku garaac qalabka korontada illaa 6. garaac si aad ugu muuqato xariiqyo, adigoo u weecanaya dhinaca socodka qunyar socodka ah; Ku ​​walaaq caanaha lo'da la qaboojiyey qaaddo si looga hortago in gelatine uusan u sii dhaadhicin salka.Markaad si fiican isku walaaqdo, si tartiib ah ugu dar kareemka fudfudud ee la kariyay, waxaa fiican inaad laba jeer ku darto, ka dibna ku dar wakhti kale oo soo socda ka dib markasta oo aad si fiican isku walaaqdo; kareem isla markaana si fiican walaaq. Meel jeex ah keega ku dhig bartanka daasadda keegga. Ku shub kala badh muusku buuxi, dhawr jeer rux, buuxinta mousse si habsami leh ayey ugu socon doontaa dhammaan jihooyinka; Ku dar jeex labaad oo keeg ah oo ku shub mooska haray buuxin Mar labaad sii keega waxoogaa ruxrux ah si aad dusha uga dhigto mid hagaagsan oo qabow. Isku walaaq matcha caanaha, ku dul saar biyo kulul oo kululee. Ku walaaq qaaddo, ka saar biyaha kulul una daa inuu qaboojiyo. Isticmaal qaaddo yar si aad u soo qaado xoogaa dareere ah oo matcha ah oo aad ugu daadiso dusha keegga si aan caadi ahayn. Isticmaal caday si aad si tartiib ah uga soo qaaddid bartamaha keega, ama u isticmaal si xor ah. Ku rid qaboojiyaha wax ka badan afar saacadood ka hor intaadan u adeegin.
Hore: Kalluunka Collagen Peptides
Xiga: 2g Xaashida Gelatin